China Opto-Electronic Package mveliso kunye nabenzi | Jitai
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeephakeji ze-opto-elektroniki, ulwakhiwo lwahluka ngokuyilwa kwesiteshi se-opto.Ukwenziwa kwephakheji kufuneka kukhethe ukubumba kunye nokwenza indlela.Lolu chungechunge lwepeyinti lilungele ibandla le-opto-elektroniki.
* Iindidi ngeendidi zesakhiwo sempahla, kunye nesakhiwo setyhubhu yefayibha okanye ikepusi yefestile.
* Iindidi ezahlukeneyo zezixhobo zeephakeji, kufuneka zikhethwe ziimpawu zephakeji.
* Kukho izikhokelo zecandelo lomnqamlezo elixande okanye icandelo elijikelezayo elijikelezayo.
* Isikhokelo sikhokelela ezantsi okanye ecaleni kwendlela kunye nolwakhiwo lwayo ngokwendlela yokuyila iimfuno zabathengi.
* Ukutywinwa kwekepusi okanye ukutywinwa kwesiciko kukhethwe yitekhnoloji efanelekileyo ngokwendlela yeephakeji.
* Umthengi ukhetha iphakheji yokugcwala ngokupheleleyo kwi-Au okanye ekhokelela ekukhetheni i-plating Au ngokweemfuno zabo.
Iphakheji yesinyithi yesixhobo se-opto-elektroniki kufuneka sime, sikhusele isixhobo se-opto-elektroniki kwaye sidlale indima ekudluliseni imiqondiso ye-opto, senza indima ebalulekileyo ekukhuseleni iiparitha ze-opto kunye nokuthembeka kwesixhobo. Isixhobo ngokubanzi kwaye sibanzi, sifuna umgangatho ophezulu nangaphezulu.Yamkela ukwakheka kokutywinwa kwe-hermetic ekonyusa ixesha elide lokuthembeka kwezixhobo.
Inkampani yethu ineeseti zobuchule bokuvelisa obuqolileyo kukho umboniso ophambili koku kulandelayo:
Ukhetho lwezinto: kukho uxinzelelo lwangaphakathi emva kwesixhobo sangaphakathi esinepakethi emiselweyo, ukunciphisa uxinzelelo lwangaphakathi izinto ze-4J29 kufuneka zikhethwe phantse yi-CTE kufanelekile ukutywina okungqinelanayo okufuna ukuba izinto zibe ne-CTE efanayo. Izinto zokukhokela kufuneka zikhethe i-4J29. Izinto ze-insulators zeglasi kufuneka zikhethwe amandla aseJapan BH anokufana ne-4J29 kwi-CTE.
Inkqubo ye-oxidation, ubuchule obuphambili kwinkqubo yokuntywila. Inkqubo yethu yokugcwala ivumela enye initrojeni kwisitovu se-oxidation ukuba ubungakanani bayo bulawulwe phantsi kwe-flowmeter.Igcina imeko ye-oxidation kubushushu obuthile kwaye ekugqibeleni yenze umbala wegundane ongwevu we-compact oxidation layer. Ukwenziwa yi-Fe2O4 kunye ne-FeO emva kohlalutyo lwe-X-ray umaleko we-diffractormeter.I-oxide iyahlangabezana nemfuno yokutywinwa okuhle kweglasi-yentsimbi ekubhekiswa kuyo kuxwebhu loxwebhu.
Inkqubo yokuntywila ibandakanya ubushushu bejika yokuntywila, okusingqongileyo, kunye nexesha lokuntywila, ukupholisa kunye neeparamitha. Ubushushu bokuntywila akufuneki buphezulu kakhulu ukwandisa ubungakanani begesi enyibilikiswe kulwelo lweglasi. Irhasi eninzi ijika amaqamza ngenxa yokunganyibiliki. Ichaphazela ngamandla ukutywina amandla kunye nokuxhathisa ukumelana kunye nenqanaba elisezantsi ayinakukuntywilisela i-lasss kunye nesinyithi ubukhulu botshintsho buncinci kakhulu kwaye busezantsi amandla okutywina.Ngobushushu obukhawulezayo bokupholisa umphezulu weglasi yokwambathisa iglasi ngokukhawuleza ukuze i-bubble eninzi ingakwazi Ngokuhamba kwexesha kunye namaqamza angaphakathi anyuka.Ukongeza ukufuma kwesitovu kukhulu kakhulu, umphunga ngokuyinxalenye unyibilika kulwelo lweglasi kubushushu obuphezulu kwaye uphume amaqamza emva kokubola.Ngoko ke iimeko ezintathu zendlela esithandweni ngexesha lenkqubo yokuntywila yimeko-bushushu 、 ixesha elidlala indima ebalulekileyo ekutywinweni komgangatho.Kusekwe kuluncwadi lwamaxwebhu imeko-bume yokuntywila kubhetele ukunciphisa ukungathathi hlangothi okanye ubuthathaka.
Inkqubo yokwenza i-electroplating, ukutyabeka komphezulu yeyona nto iphambili kwinkangeleko yemveliso, imfuneko yokubopha kunye ne-weldability.Iinkampani zethu zisebenzisa ngokupheleleyo i-electrolytic Ni kunye nesingxobo esipheleleyo seAu kwaye ukubonakala kunye nokudibana kwepini kufuneka kuhlangabeze imfuno.
Kukho izibonelelo zepakethe ye-opto-elektroniki eyenziwe yinkqubo yethu yangoku:
EenSeen ukusuka ekubonakalisweni kokugcwaliswa kweglasi yokwambathisa kuyalingana kwaye akukho kukhwela, akukho sifotho, akukho bubble njalo njalo kwiziphene.
EenSeen ukusuka kwintsebenzo, ukumelana nokugquma kuphezulu.
Ukongezwa kwengubo yomelele
Uxinzelelo lwe-Ni plating lincinci kwaye amandla e-anti lead fatigue makhulu.
Ukuxhathisa kobushushu obuphezulu, i-oxidation, i-corresion kunye nokuguga kwephakheji kunamandla amakhulu.
Imveliso ine-hermeticity ethembekileyo.
Egqithileyo Izixhobo zoQhagamshelo lwe-Elektroniki
Okulandelayo: Iphakheji yesenzi soxinzelelo
Iphakheji yeHermetic Yento yeOptoelectronic
Iphakheji yeHermetic yezixhobo zeOptoelectronic
Iipakethe zeHermetic zeziXhobo zeOptoelectronic